परनिर्भरताको डरलाग्दो अवस्था भोग्दै देश | चितवन पोष्ट
परनिर्भरताको डरलाग्दो अवस्था भोग्दै देश
सुन्दैमा उदेकसँगसँगै नरमाइलो पनि लाग्छ कि नेपालले पोहोर साल चामलमात्रै २६ अरबको किनेर नेपाली जनताको पेट भ¥यो । देशलाई कृषिप्रधान भन्दै गर्ने, उता चामलमात्रै २६ अरबको किन्ने । योजत्तिको पीडादायी विषय अरु के हुन सक्ला ! थाहा नपाउनेहरुले यो देशले खासगरी भारतसँग चामलमात्रै किनेको भन्ठानेका होलान् । निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्ने विषय के हो भने नेपालले पोहोर साल चामलमात्रै किनेको होइन, मकै किन्यो । भटमास किन्यो । आलु र प्याज किन्यो । कपडा किन्यो । पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको के कुरा गर्नु ! पेट्रोलियम पदार्थ त्यताबाट किन्न लागेको युगौँयुग बितिसकेको छ । अब यो वा त्यो नामको सामान विदेशबाट किनियो भन्नै परेन, सबका सब नेपाली जनतालाई चाहिने चीजबीज विदेशबाटै किन्ने गरिएको छ । विदेशीले गर्ने खालका अन्य नामका चीजबीज उत्पादन गर्न सकिएन, उद्योगधन्दा सोचेअनुसार स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिएन लौ भैगो, प्रयासै नगर्नुलाई चाहिँ ठीक मान्न सकिन्न ।
नक्कली प्रजातन्त्र २०४६ सालमा आएपछि नेपालका साथी देशहरुले उपहारस्वरुप दिएका उद्योग, कलकारखानाहरु कथित प्रजातान्त्रिक सरकारले भटाभट कौडीको भाउमा बेच्यो । लाजै नमानी बेच्यो । भृकुटी कागज कारखाना यसको सबैभन्दा मह¤वपूर्ण उदाहरण हो । निजीकरणको नाममा व्यक्तिलाई जनताको धन बेचेर सरकारमा बस्नेहरुले कमिसन खाए । दुनियाँमा त्यो तरिकाले सरकारमा गएकाहरुले जनताको धन निजीकरणको नाममा बेच्दा नयाँ उद्योग, कलकारखानामा लगानी गर्ने चलन छ । तर, यो देशमा त गरियो के भने दुनियाँले दानस्वरुप दिएका उद्योग, कलकारखाना बेचियो तर फेरि त्यो रकम अन्य उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न लगानी गरिएन । बेचियो, पैसा भागबन्डा लगाएर कमिसन खाइयो तर फेरि लगानी गरिएन । यो काम सरासर राष्ट्रलाई लुट्ने काम थियो, तर त्यो लुटबारे कसैले कुरा उठाएन । धेरै पछिमात्रै त्यो खालको राष्ट्रिय उद्योगधन्दा बिक्रीबारे विरोध जनाउने काम भयो । भएका उद्योगधन्दा बेचियो । किन्नेले सञ्चालन गरेन । बेरोजगारहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्यो ।
यो अवस्थालाई यसरी बुझ्नुपर्छ कि एउटै मजदुर दुईतिर काम गर्ने अवस्थामा हुन्छन् । दिउँसो उद्योगमा जागिरे मजदुर बिहान–बेलुका कृषिकर्ममा व्यस्त रहन्छ । यसरी देशभरिका उद्योग, कलकारखानाहरु बन्द भएपछि कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले आधाभन्दा कम काम पाए । धेरै कारणहरुमध्ये यो एउटा कारण बन्यो कि कृषि र उद्योग क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरु कामको कमीले विदेशिन बाध्य भए । कामदार विदेशिएपछि कृषि क्षेत्रमा स्वतः कामदार कम भयो । यसले कृषि क्षेत्रलाई टुहुरो बनाउन भूमिका खेल्यो । राज्यसञ्चालनमा देखिएको गम्भीर त्रुटिका कारण पनि कृषि उत्पादनमा ह्रास आयो । संसारमा कतै पनि कृषियोग्य जमिनमा घर वा उद्योग, कलकारखाना निर्माण गर्ने चलन छैन । तर, नेपालमा जसलाई पनि जहाँ पनि आफूखुसी घर बनाउन अनुमति दिइयो । यसो गर्दा खेतीयोग्य जमिन विनास भयो र अन्न उत्पादनमा कमी आयो । अर्कोतर्फ, खेतीयोग्य जमिनलाई जग्गा कारोबारीहरुले साना–साना टुक्रामा विभाजन गरेर घडेरीमा रुपान्तरण गरे । यो कारणले पनि अन्न उत्पादनमा ह्रास आयो ।
ठूलो क्षेत्रफल सानोमा रुपान्तरित हुँदा परिणाम नकारात्मक त आएकै थियो, बाँकी रहेका ठूला क्षेत्रफल भएका जमिनमा समेत खेती नगर्नेहरुको बाहुल्यता देखिन थाल्यो । जसले ठूला क्षेत्रफल भएका जमिनमा खेती गर्न इच्छा देखाए तिनको जमिनमा सिंचाइको व्यवस्था सरकारले गर्न सकेन । पानीबिना संसारमा केही पनि कल्पना गर्न सकिन्न भने बिनापानीको बन्दोबस्त उब्जनी राम्रो हुने कुरै भएन । कतैकतै सिंचाइको व्यवस्था गरिँदा त्यहाँ ठीक समयमा मलको बन्दोबस्त भएन । उन्नत बीउको समस्यासमेत समाधान भएन । जमिन टुक्रिने, सिंचाइ नहुने, मलबीउ नहुने, काम गर्ने जनशक्ति नहुने आदि समस्याका कारण मुलुकमा सबै नामका अन्न उत्पादनमा कमी आयो ।
सत्तरीको दशकसम्म भोकमरी लागेका देशलाई अन्न बाँड्ने नेपाल आज आएर लाज पचाएर अर्को देशसँग अन्न किन्न थाल्यो । करोडौँ रूपैयाँको कागतीसमेत किन्न थाल्यो । सबथोक किन्ने दाम आजसम्म नेपाली नागरिकहरुले विदेशमा रगत–पसिना बगाएर कमाउँदा नै सम्भव भएको हो, भोलि कुनै कारणवश आज नेपालीले पाइरहेका रोजगारी गुम्ने अवस्था आयो भने नेपालको आम्दानी जिरो हुन्छ । आर्थिकरुपले देश टाट पल्टिन्छ । फेरि मानव स्वभाव कस्तो हो भने कहिले मिल्ने, कहिले झगडा गर्ने खालको स्वभाव मान्छेमा हुन्छ । यही कारणले देश–देशबीच युद्धसमेत हुन्छ । संसारको कुनै कुनाका दुई देशबीच युद्ध हुँदा विश्व तरंगित हुन्छ भने सँगै जोडिएका छिमेकी देशहरु युद्धमा होमिँदा छेउछाउका देशहरु प्रताडित हुन्छन्, यसमा शंका नगर्दा हुन्छ । असम्भव के छ र ! सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो । युद्धका बखत कुनै पनि देशले आफ्नो देश र आफ्ना जनतालाई जोगाउने काममात्रै गर्छन् । त्यो बेला पनि युद्धमा होमिएका चीन र भारतले नेपाललाई चाहिएको चीजबीजमा सहयोग गरेका होइनन् । बडो कष्टसाथ आफ्नै उत्पादनमा नेपाल बाँचेको हो ।
अब यतिबेला नेपाल परनिर्भरताका हिसाबले भन्ने हो भने ९९ प्रतिशत परनिर्भर भनिदिए हुन्छ । दिने देशहरु लडाइँमा होमिए भने यो देशको हालत के होला ? आज भारत र चीन आर्थिक तथा भौतिक प्रगतिका हिसाबले विश्वलाई चकित पार्ने किसिमले अघि बढिरहेका छन् । अगाडि पर्दा मुसुक्क हाँस्ने गरे पनि प्रतिस्पर्धीहरुबीच मन सङ्लो नहुन पनि सक्छ । फेरि पनि भारत र चीन आमने–सामने भए भने वा हानाहानको स्थितिमै पुगे भने त्यो बेला नेपालको अवस्था दयनीय हुने पक्का छ, किनभने नेपालमा उत्पादन छैन । कुरा चीन र भारतको मात्रै होइन, अमेरिका र इरानकै बीच लडाइँ भयो भने वा अहिले हार्दिकता विकास भइरहेको अवस्था बदलिएर अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचमै युद्ध भयो भने पनि त्यसको सीधा असर नेपालमा पर्छ ।
यस्तो बताइन्छ कि पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर धनी भएका खाडी मुलुकहरुमा मात्रै नेपालीहरुको संख्या झन्डै २५ लाख छ । खाडी मुलुकहरु आपसमा लड्ने अवस्थामा पुगे वा अन्य शक्तिशाली राष्ट्रले खाडीमा आक्रमण गर्ने अवस्था आए वा कुनै प्राकृतिक प्रकोपका कारण वा डरलाग्दो रोगका कारण आज नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेका खाडी राष्ट्रहरु घुँडा टेक्ने अवस्थामा पुगे भने पक्का छ नेपालीहरु रोजगारीबाट विस्थापित हुनेछन् । आज जुन मात्रामा रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ त्यो कट्टा हुनेछ । एकातिर धन आम्दानी नहुने र अर्कोतर्फ विदेशबाट स्वदेशी नागरिकहरुको लाखौँ संख्या मुलुकमा थपिने अवस्थालाई नेपालले कुनै पनि हालतमा थेग्न सक्दैन । अवस्था कहालीलाग्दो हुन पुग्छ । जनतालाई विदेशमा भाडामा लगाएर त्यसबापत् आउने रेमिट्यान्सबाट केही समयका लागि देश हाँक्ने कल्पना गर्नुलाई सायद् अन्यथा मान्न नमिल्ला, तर आकासमा सूर्य र चन्द्रमा रहुन्जेल जनतालाई विदेशमा भाडामा लगाएर खान्छु भन्नु सरासर गलत काम हो । यो अस्थायी आम्दानीले मुलुकलाई कुनै पनि हालतमा फाइदा गर्दैन । कुनै कारणले विदेशीले नेपालीलाई रोजगारी दिन नसक्ने अवस्था आए वा नेपाली जनता विदेशमा गएर काम गर्न नसक्ने अवस्था आए यस्तो दुवै अवस्थामा नेपाल खतरामा पर्न सक्छ ।
स्वदेशमै भएका र पछि थपिएका नेपालीलाई पाल्न नेपाललाई धौधौ पर्न सक्छ । सीधा हिसाबले त अन्न अभाव हुन्छ, यसको साथमा औषधिलगायत यतिबेला उपलब्ध चीजबीजसमेत अभाव हुन जान्छ । यस्तो भोलिको सम्भावित खतराबाट देशलाई जोगाउन पनि अब नेपाल हरेक शीर्षकमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । पहिले बाँच्ने कुराको राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । बाँच्नका लागि सबैभन्दा पहिले अन्न, पानी र आवास चाहिने हो । औषधि, अस्पताल र डाक्टर यसपछि चाहिने हो ।
आजसम्म नेपालमा केही सहरलाई छाडेर हावा प्रदूषित भएको छैन । भूकम्पका कारण पहाडी जिल्लाका केही स्थानमा पानी संकट भए पनि देशैभरि पानी संकट भएको छैन । अब रह्यो सवाल अन्नको । अन्न अभाव भएरै हो, नेपालले पोहोर साल २६ अरबको चामल भारतबाट किनेको । भोलि अन्न खरिद गर्न नेपालसँग पैसा नहुन पनि सक्छ भने अर्कोतिर भारतले आज नेपाललाई बेचिरहेको अन्न कुनै कारण नबेच्न पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका अगाडि कुनै विकल्प रहने छैन । भोकमरीका कारण नेपाली शरीरहरु ढल्नुबाहेक अर्को विकल्प भेट्न सकिन्न । त्यसकारण “बाँचे नाच्न पाइन्छ” भनेजस्तै सबैभन्दा पहिला बाँच्ने कुराले नै प्राथमिकता पाउने हुँदा अब कम्तीमा नेपाली जनता बाँच्ने बुटीको रुपमा रहेको अन्न उत्पादनमै नेपाली जनता लाग्नुपर्ने भएको छ । अन्नपानीको बन्दोबस्त गरेपछिमात्रै अर्थोकको सम्झना हुन सक्छ । अझै पनि समय घर्किएको छैन, अब अरु सबथोक छाडेर अन्न उत्पादनमा सम्पूर्ण देशवासीले मेहनत गरौँ । पोहोर साल २६ अरबको चामल किनिएको छ भने यसपटक सकेसम्म किन्न नपर्ने अवस्थामा मुलुकलाई पु¥याऊँ । नसके थोरै रकमबराबरको किनौँ । अब कुनै पनि हालतमा अन्नकै लागि विदेशीको अगाडि ङिच्च दाँत देखाएर अन्न माग्ने कामचाहिँ बन्द गरौँ ।